TTSweet: ဂျူဂျူလေးရဲ့ ပညာရည်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်း ...
Posted by T T Sweet at 3:32 AM
rose November 19, 2010 at 4:05 AM
ဂျုးဂျုး တော်တော်ထွားလားတယ်နော်။ အရပ်ရှည်မယ် ထင်တယ်။ ကွန်မန့် မရေးဖြစ်ပေမယ့် တီဆွိ ဘလော့ဂ်ကို အမြဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
Sunny November 19, 2010 at 5:38 AM
ဂျူဂျူးလေးက ငယ်ငယ်လေးတုန်းကတည်းက ချစ်စရာလေးနော်.. အခုကျတော့လည်း တကယ့်ကျောင်းသူကြီးစတိုင်နဲ့.. စာမေးပွဲပြီးကျောင်းအများကြီးပိတ်ထားတာ ရှယ်ပဲ.. :)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 19, 2010 at 6:13 AM
ကိုပေါ November 19, 2010 at 9:51 AM
Best character ရတာ အင်မတန် ဂုဏ်ယူစရာပါ။ တရုတ်စာ တော်တယ်နော်။ ဂျူဂျူက တော်တော်ထွားလာတယ်။
tin min htet November 19, 2010 at 10:50 AM
ဆုမချိတ်ပေမယ့် ၃ ဘာသာလုံး Band 1 ဆို တော်ပါတယ် တီတီဆွိရဲ့။
ဦးကျောက်ကတော့ ဂျူဂျူးဆရာမ တရတ်မလေးကို လာကြည့်တာ ထင်ပါရဲ့ :P
စန္ဒကူး November 19, 2010 at 11:23 AM
သမီးလေးက ညိုချောလေး.. သွယ်သွယ်ရှည်ရှည်လေး..ချစ်စရာ..
Sonata Cantata November 19, 2010 at 11:52 AM
တီဆွိရေ.. မနေ့ပေါ့...အိမ်နားက သားငယ်နဲ့ ရွယ်တူ P1 ကျောင်းတော့မတူတဲ့ သမီးလေးက သူဆုယူရမယ် Second Prize ဆိုတော့ ရေစင်က ဟင် Silver ကြီး၊ သားကမှ Gold Medal ရတာလို့..ခပ်တည်တည်နဲ့ပြောနေတာ။ သမီးလေး အမေက သားလည်း ဆုရတယ် ဟုတ်လားလို့ မေးတော့မှ...သားတို့ တတန်းလုံးရတာလေ..Sport Day တုန်းကတဲ့
(အိမ်က သားတွေကတော့ အဲ့သလို...:D)
သက်ဝေ November 19, 2010 at 2:27 PM
၃ ဘာသာလုံး အမှတ် ၉၀ ကျော်တွေချည်းပဲ...
တော်တဲ့ သမီးလေး... တခုခု ဆုချလိုက်နော်...း))
မသီတာရဲ့ ကော်မန့်ကို ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ.....
ဖိုးတုတ် November 19, 2010 at 2:31 PM
အဖေရော အမေပါ စာတော်တော့ သမီးဂျူဂျူးလည်း စာတော်မှာပေါ့ ၊ ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်တဲ့ တရုတ်စာအမှတ်ကောင်းတာတော့ တကယ့်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါ ၊ Band 1 က မလျော့အောင် အတန်းကြီးတဲ့အထိ ဆက်ကြိုးစားပါ ၊ ကျွန်တော်သားလည်း P1, P2 တုန်းက တရုပ်စာကို Band 1, တဖြေးဖြေးနဲ.ကျလာလိုက်တာ P5 မှာ အောင်ရုံလေးပဲ ၊ ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကတော့ကောင်းပါတယ်၊ ဘာသာစုံကျူရှင် ယူလို.ထင်ပါ့ရဲ့ ၊ အဲဒါ ပညာရေးတိုးတက်မူ မှတ်တမ်းမှာ သချာင်္ ၁၅မှတ်ပဲရလို. အမေလုပ်သူက ကျောင်းကိုလိုက်ပြီး အရင်က အဖြေလွှာတွေနဲ.သွားရှင်းရသေးတယ်၊ ကျွန်မသားသချာင်္တစ်ခါမှ မကျဖူးဆိုပြီး ၊ နောက်ဆုံးတော့ အခြားကျောင်းသားအမည် (first name) နဲ.မှား လို.တဲ့ ၊ ကောင်းရော ၊ ဒီမှာလည်း အံသြစရာကောင်းအောင် မှားတတ်လို. လတ်တလော အတွေ.အကြုံကို ရှယ်လုပ်တဲ့သဘောပါ ၊
ဒီနေ.က ဒီနှစ်အတွက် ကျောင်းနောက်ဆုံးနေ.မို. ဒီဇင်ဘာလကုန် အထိတော့ အိပ်ရာကမနက် ၅နာရီမထရဖူး ဆိုတာတွေးပြီးပျော်မိသေး ၊ အခြားမိဘတွေလည်း ပျော်လိမ့်မယ်လို. ထင်မိပါတယ်၊
မေဇင် November 19, 2010 at 2:43 PM
ဂုဏ်ယူစရာပဲနော်....မြန်မာ ကလေးလေးတွေ တော်တယ်...ကြားရင် အရမ်းပျော်တာပါပဲ။
Anonymous November 19, 2010 at 5:02 PM
I would like to know diffrent of playgroup and prenursery. Kindly write for me detail. Thanks
မြူးမြူး November 19, 2010 at 6:49 PM
ဂျူဂျူလေးက တော်လိုက်တာ.. အမှတ်တွေက ကောင်းမှကောင်းပဲ.. အိမ်ကသားသားကိုလဲ Play Group ပို့တော့မလို့.. ၂နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့လေ..
ဂျူးဂျူး ရေ ကျောင်းပိတ်တုန်းလေး မေတို ဖေတို့ မောသွားအောင် ဗြောင်းဆန်အောင် ဆော့ပေအုန်းဟေ့ နားချိန်မှာ ရှယ်နား ဆော့ချိန်မှာ ရှယ်ဆော့ စာကျက်ချိန်ကျတော့လည်း ရှယ်ကျက်ရတာကိုးနော့
ရှယ်ပျော်နေပြီ ဟေ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်
လသာည November 20, 2010 at 2:04 AM
ဂျူးဂျူးလေး ငယ်ငယ်ကနေ အခုထိ မှတ်တမ်းတွေ အဲလို သိမ်းထားပေးတော့ သူလေးကြီးလာရင် ကြည့်ကြည့်ပြီး တအားပျော်မှာနော်။
ဝက်ဝံလေး November 20, 2010 at 6:15 AM
သမီးက ဖအေ တူပဲ ဦးမောင်ခြိမ့်နဲ့ တူတယ်နော် ဟုတ်လား ဒေါ်ဆွီတီ
အယ် ဂျူဂျူက ထွားလိုက်တာ များကိုတောင် မှီတော့မယ်တော့ ဟဟဟ
နံမည်က Rachel လား ချစ်စရာလေး
ကလေးက တော်တယ်လို့ အပြောတော့ဘူးနော် ပြောစရာမလိုတော့လို့ ဟဲဟဲ
Moe Cho Thinn November 20, 2010 at 9:58 AM
ဂျူဂျူလေးက တယ်တော်ပါလား။ မိဘတွေ သေချာ ဂရုစိုက်လို့ ထင်တယ်။ သမီးလေး တော်တဲ့အထဲပါနေတာကိုက ဂုဏ်ယူ ချီးကျူးရမှာပါ။ ပထမဆုထက် best character ဆုရတာ ပိုဝမ်းသာစရာပေါ့ မဆွိ။ ကလေးကို များများ appreciate လုပ်ပေးနော်.. သူငယ်ငယ်က ခြယ်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေက သိပ်ချစ်စရာပဲ။
T T Sweet November 21, 2010 at 1:11 AM
ဟိုးအပေါ်က အနောနိမတ်စ် မေးထားတာလေးတွေ့တော့ အင်တာနက်ထဲ လျှောက်မွှေပြီး ရှာကြည့်လိုက်တော့ Play group နဲ့ Pre-nursery က သိပ်တော့ မကွာလှပါဘူးတဲ့။ အသက်ကိုကြည့်ပြီး ပိုင်းထားတော့ Play group က ၁၈လကနေ ၃နှစ်အထိ၊ ပညာရေးပိုင်းကို ဦးစားမပေးပဲ ခလေးတွေ ပျော်ဖို့ အဓိက ထားတဲ့ကျောင်းပေါ့။
Pre-nursery ကျတော့လဲ အသက်အလိုက် ကန့်သတ်ထားတာပဲ။
၅နှစ်- Kindergarten 1
၆နှစ် -Kindergarten 2
၇နှစ် - Primary 1 ... အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ သတ်မှတ်ထားတာပါ။
ငွေစန္ဒာ November 21, 2010 at 5:54 AM
ကွန်မန့် မရေးဖြစ်ပေမယ့် တီဆွိ ဘလော့ဂ်ကို အမြဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
Phomu September 7, 2011 at 6:29 PM
စာတော်တဲ့ သမီးလေးဆိုတော့ အားကျစရာကောင်းတယ် အမရေ